Ozone denitration Denitration mampiasa teknolojia
Ny fitsaboana dia nanao denitrification mampiasa ny teknolojia denitrification oxidative ny mpanao molekiola (Ozone) mba hahatratra ny lasibatry ny NOx émission fitsipika. Mandritra izany fotoana izany, ny antony ka hitaona ny oksizenina mifantoka, hihena ny rano mari-pana sy ny etona entana fiovana dia nandinika. Ny vokatra dia nampiseho fa rehefa adsorption desorption tsindry sy ny fanerena ny VPSA oksizenina gropy dia 40-48 kPa sy -45-55 kPa, ny oksizenina fitanana tonga ny tandrify sarobidy maherin'ny 92%. Hihena ny rano mari-pana dia tsy tokony hihoatra ny 32 ° C. Mandritra izany fotoana izany, dia nanolo-kevitra fa ny NOx émission foana amin'ny fanarahana ny hamaroan'isa fifehezana ny dabilio hitsena ny etona entana miova.
Miaraka amin'ny fanambarana ny fankatoavana ilay "Action Plan for ny fisorohana sy ny Fanaraha-maso ny ny fandotoan'ny rivotra" sy ny hafa ny émission fampihenana ny entona flue loto avy amin'ny arina-etona amin'ny voaroaka, ny fanaraha-maso ny azota azôty NOx efa nihatsara koa. SCR amin'izao fotoana izao ny karazana denitrification teknolojia miaraka amin'ny fanesorana mahomby indrindra fahombiazana. Na izany aza, rehefa nanenjika ny tanjona ny ambany NOx émission, izany teknôlôjia izany dia hahatonga amoniaka taratasy kely be loatra noho ny raiki-tampisaka sy ny fampifangaroana ny fizotran'ny uneven saha. Mandritra izany fotoana izany, tahaka ny fitaovana hitondra fiovana goavana Loading mitombo, ny fiovam-po taham-SO2 ho SO3 mitombo, ary ny farany setroka ny harena tafiditra ao ny fitanan'i ny NH3 sy SO3 ao amin'ny entona dia bebe kokoa mainka nampahaditra ny jamming-manidina preheater. Ny oxidative denitrification teknolojia mifototra amin'ny hafanana ambany mavitrika molekiola tena tsara mba hialana ny olana etsy ambony. Tsy mitovy amin'ny SCRs, mavitrika molekiola (toy ny O3) ny rafitra ho an'ny synergistic fitsaboana ny flue mandatsa-dranomaso ny alalan 'ny oxidation ny mpandoto toy ny metaly NO sy mavesatra. Ity dingana ity dia tsy misy ifandraisany amin'ny karazana etona, ny fototry ny fitsaboana no rambo mandatsa-dranomaso ny etona, ny oxidation ny NO sy mavesatra metaly ao amin'ny flue mandatsa-dranomaso ho avo-vidiny NOx sy ny vy oxides, ary avy eo ny fandrindràna ny solika toy ny NOx, SO2, ary metaly mavesatra. Esory.
Eto amin'ity taratasy, mpanao oxidative denitration teknolojia nampiasaina mba hianatra ny NOx émission fanaraha-maso ao amin'ny arina-nitifitra flue mandatsa-dranomaso, ary ny lafin-javatra mahakasika denitration fahombiazana toy ny oksizenina mifantoka, hihena ny rano mari-pana sy ny etona entana fiovana dia nandinika.
1, hanatsarana ny fandaharana
Etona tany am-boalohany ny toby famokarana herinaratra dia 2 karazana 35t / h sy 1 hametraka ny 50t / h rojo lafaoro lehibe. Tany am-boalohany desulfurization mando mampiasa rafitra napetraka ny vatosokay gypsum ho an'ny SO2 fomba hanesorana. Ny mpanao molekiolan'ny oxidative denitration teknolojia dia ampiharina amin'ny rambony flue taorian'ny flue confluence entona. Noho izany, afa-tsy ny flue fikorianan'ny mandatsa-dranomaso sy ny azota azôty ny tahan'ny afa-po ny rambony flue mila hodinihina, izay tsy miankina amin'ny setroka fomba ny etona. Amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana desulfurization tany am-boalohany, tany am-boalohany ihany no flue mandatsa-dranomaso desulfurization tilikambo Inlet flue nisy farany, ary mavitrika molekiolan'ny reactor no napetraka. Ny sisa ny fiovana ireo fitaovana vaovao, araka ny hita ao amin'ny Sary 1. Oksizenina rafitra, rafitra molekiolan'ny mazoto, hihena ny rano sy ny herinaratra ary ny rafitra mifehy fitaovana rafitra vondrona fanampiny. Ny rafitra oksizenina mampiasa ny adsorbent mba hisaraka oksizenina sy ny azota ao amin'ny rivotra amin'ny alalan'ny adsorption sy ny desorption hamokatra avo kokoa ny oksizenina fitanan'ny. Rehefa avy pressurization, deoiling, sy ny fanesorana ny vovoka, ny oksizenina miditra ny molekiolan'ny mavitrika gropy, ary farany ny mavitrika molekiola (O3) dia niteraka ampahany amin'ny alalan'ny fahafahana amin'ny efi-trano ny marary mitsika. Marary mitsika ny avo-jiro malefaka ny oksizenina ao amin'ny efi-trano marary mitsika miteraka be dia be ny hafanana, ka hihena ny rano any ivelany dia takiana mba nafanaina-hitondra ny marary mitsika efi-trano mba hampitombo ny fitanan'i ny mpanao molekiola (O3).